Shenyang Ny Lalàna Iraisam-Pirenena Hentitra - Asa Mpisolovava - Shenyang Sy Shina Asa Mpisolovava - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Shenyang Ny Lalàna Iraisam-Pirenena Hentitra - Asa Mpisolovava - Shenyang Sy Shina Asa Mpisolovava
Shenyang ny Lalàna Iraisam-pirenena Hentitra website, mifototra amin Liaoning Sam Lalàna Mafy, no iray amin'ny lehibe indrindra, feno, iraisam-pirenena mpisolovava namany sary, no nanomboka sy notohanan'ny Shenyang malaza mpisolovava Jerry liu, amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny maro miavaka sy tsara za-draharaha ny mpisolovavaNy namany sary foana izao manaraka izao ny miasa hevitra hoe"ny Firindrana dia volamena sy hampitombo ny tanana an-tanana".
Shenyang ny Lalàna Iraisam-pirenena Hentitra vohikala tranonkala ny fahitana.
Na inona na inona zava-bita nalaina avy amin'ny mpahay lalàna mifandray akaiky miaraka amin'ny mpanjifa hatramin'ny andro ny Lalàna Mafy dia naorina. Ny fanovana politika sy ny safidy ny tetika dia mirona amin'ny efa misy sy mety ho mpanjifa.
Eo amin'ny sehatry ny WTO rafitra, ny Lalàna Mafy dia mifanaraka amin'ny"Shenyangis ny fototra, ny Avaratra dia ny fampandrosoana ny faritra, hiatrika ny firenena manontolo sy manome lanja ny tontolo izao".
Ao an-toerana sy iraisam-pirenena ny loharanom-baovao ny toe-javatra dia uniformly nataony an-fiheverana.
Ny Lalàna Mafy dia nanangana ny raharaham-barotra fiaraha-miasa amin'ny firenena maro sy ny faritra, toy ny, Amerikana, Britanika, Taiwan, Hong Kong, sns.
mahomby ny toe-javatra dia mihoatra noho ny zato nandritra ny fiaraha-miasa, izay midika hoe ny Lalàna Mafy mba hanome kalitao ambony ara-dalàna ny asa ho an'ny Britanika sy ny Amerikana ny rafitra ara-Dalàna. Shenyang ny Lalàna Iraisam-pirenena Hentitra tranonkala no manokana, miara-miasa sy feno tranonkala. Ny manokana ny fitantanana ny rafitra sy ny fomba ny ekipa miasa foana ny fitsipika amin'ny tranonkala. Ny tranonkala dia mifantoka amin'ny fahalalana, amin'ny vondrona tanteraka za-draharaha, tena mahay, zavatra maro ny mpahay lalàna. Ny website dia niforona ny asa ny ekipa iray izay am-polony malaza manam-pahaizana manokana, ny manam-pahaizana, ny dokotera, ny tompo sy mpiara-miasa amin'ny sekoly malaza ao shina. Ampahany amin'ny mpisolovava manana ny matihanina amin'ny anaram-boninahitra ny mpahay toe-karena, ny bola na ny injeniera, sns.
Ny mpisolovava mifantoka manokana amin'ny fampandrosoana, amin'ny fandinihana amin'ny ankapobeny ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa.
Ny Lalàna Mafy tsy tapaka mandrindra professional fianarana sy manasa ny olo-malaza sy tena za-draharaha ny manam-pahaizana manokana ho an'ny fifanakalozan-kevitra sy ny forum. Ny raharaham-barotra scopes ahitana sivily, ara-toekarena, ny ady heloka bevava, - pitsarana ara-panjakana, ny orinasa sy ny vahoaka ny andrim-panjakana, ny governemanta tsy ara-dalàna ny torohevitra ara-dalàna ny torohevitry ny iray ny faritra tsirairay ny torohevitra ara-dalàna, ny fitantanana ny fanavaozana ara-politika sy ny fanariana ny fifandirana isan-karazany-pirenena orinasa sy ny vahoaka intuitions, misahana ny toe-javatra sy ny tsy-pitsarana raharaham-barotra ny fitantanam-bola, ny fiantohana, ny hetra, ny trano sy ny injeniera, real estate, tendering sy ny mpanolo-tsaina, ny governemanta mividy, lalamby, lalambe sy ny rivotra ny fitaterana, ny fananana ara-tsaina, ara-pitsaboana ny fifandirana, ny fahavoazana ara-batana, ny varotra iraisam-pirenena, fampiasam-bola, fiarovana, hoavy ny raharaham-barotra, ny asany sy ny mpiasa, ny fananana ny lova, ny fananganan-jaza sy hamporisika fifanarahana ny fifandirana, ary ny fanambadiana sy ny fianakaviana, sns.
Shenyang ny Lalàna Iraisam-pirenena Hentitra tranonkala dia tranonkala lehibe ny zava-bita.
Maro ny mpahay lalàna dia avahana ny mpisolovava ao anatiny sy ivelan'ny faritanin'i Liaoning. Dia efa nanao toy ny mpiasa na ny mpisolovavan'ny fiarovana ho an'ny lehibe maro sy sarotra ny toe-javatra ao amin'ny faritra, na dia eo aza ny sehatra ny firenena manontolo. Anisan'ny malaza toe-javatra toy izao manaraka izao: ny raharaha fandrobana, ny fakàna an-keriny sy famonoana tamin'ny heloka bevava Li, ny raharaha ny hosoka. billion Yuan mpanao heloka bevava i Wang sy ny Vilany, ny trosa ny raharaha nananan'ny B orinasa, Ny Banky, ny raharaha M fifanarahana fifandirana eo Amin'ny orinasa ho B Orinasa vahiny. rehetra ny lefitry ny asa manampy ny manan-danja ny mpanjifa mba hamonjy ny very tsy latsaky ny iray lavitrisa. Ny mpahay lalàna ao amin'ny Lalàna Mafy hatramin'izay nanatrika ny fandaharana sy namoaka fanadihadiana amin'ny alalan'ny maro ny fampahalalam-baovao. Maro ny toe-javatra sy ny zava-bitany ny mpisolovava dia nitatitra ary navoakan'ny Shenyang TV, Liaoning ara-dalàna ny Fanabeazana Gazety, Liao-Shen Alina Gazety, Shenyang Alina Gazety, Vanim-potoana ara-Barotra Gazety, Liaoning Tantsaha ny Gazety, sns. Ny mpisolovava efa nanome tolotra tsara ho tsy latsaky ny iray an-jatony ny Orinasa, toy ny torohevitra ara-dalàna ny Liaoning Yige-haoer Realty Co, Ltd, Liaoning Famatsiana sy ny Fivarotana fiaraha-miasa, Shenyang FangLiao boloky Hazo Co, Ltd, Sheyang Dongyuan Fanafanana Co, Ltd, Shenyang Bangde ara-Tsaina Co, Ltd. Rehetra ny asa no tena fizahana tamin'ny feo tokana noho ny mpanjifa. Shenyang Lalàna Mafy vohikala tranonkala iray amin'ny maro-bahoaka sy ny ara-tsosialy ny loharanom-baovao. Ny Lalàna Mafy mandoa iray ny saina hitandrina akaiky sy marin-toerana ny asa manan-danja ny fifandraisana amin'ny fikambanana ny lalàna, ny fitantanana sy ny rafi-pitsarana, dia Mipetraka eo izany, ny Lalàna Mafy dia afaka mahatakatra marina ny tena fampiharana ny efa misy lalàna, lalàna sy ny politika ao an-toerana ary ny fironana vaovao ny lalàna. Ary mandritra izany fotoana izany, isika dia atao tsy tapaka ny handrindra sy ny orinasa be amin'ny governemanta, orinasa, TV toby sy ny milina fanontam-pirinty. Ny Lalàna Mafy ihany koa ny mitandrina tsara ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery malaza maro fikambanana, toy ny Fiarovana ny Orinasa, ny Fampiasam-bola amin'ny Orinasa, ny Lalàna Hentitra, kaonty mafy, fananana fanombanana mafy, sy ny ara-barotra komity, mpisolovava ny fikambanana an-trano sy any ivelany. Ny Lalàna Mafy dia manaraka ny Kianja Monisipaly sy Kafa Vahoaka ny Fitsarana ny Tanànan'i Shenyang. Ny Lalàna Mafy no tena nandravaka ofisialy scriptorium amin'ny faritra ny roa zato metatra tora-droa.
Ny mpisolovava sy ny mpiara-miasa dia afaka miara-miasa amin'ny avo fahombiazana toy izany kanto-javatra amin'ny ankehitriny tsirairay ny telefaonina sy solosaina, toy izany tsara tarehy miasa toe-javatra hanompo amin'ny maha-azo antoka ny fiarovana ho antsika mba hanome ny tolotra ara-pitsarana amin'ny avo fahombiazany sy ny toetra tsara.
Ankoatra ny nanamarika ny mpitarika ao amin'ny asa-pitsarana, Ny Mafy dia manana tantara mifono fahombiazana sy ny zava-bita tao anatin'ny efa-dehibe ny fanao: ny lalàna mifehy ny heloka bevava, ny fanatanjahan-tena sy fialam-boly ny lalàna, ny zon'ny olom-pirenena, sy ny loza torts. Eo ambanin'ny fitarihana ny mpampanoa lalàna teo aloha Atoa Wang, ny Orinasa dia ampiasaina ny karazana high-profile heloka bevava. Indrindra indrindra, Ny Mafy misolo tena ny olona, raharaham-barotra, ny mpitantana, mpiara-miasa ao amin'ny Lalàna momba ny Orinasa sy vondron'orinasa amin'ny sehatra rehetra ny heloka bevava dingana amin'ny fitondrana federaly sy ny fanjakana ny fitsarana, anisan'izany nandritra ny grand jury fitsarana, fiangaviana ny fifampiraharahana, ny didim-pitsarana, ny fitsarana sy ny antso. Toy ny teo aloha ny federaly sy ny fanjakana na ny mpampanoa lalàna, ny mpisolovava maintsy aseho an-jatony ny toe-javatra ny grand jury ary dia toy izany no akaiky zatra ny dingana sy ny fomba hisorohana ny fiampangana. Isika ihany koa dia efa betsaka ny traikefa nitarika anatiny na ny governemanta famotorana ary afaka manome fanampiana ara-dalàna mikasika ny orinasa fanajana sy ny fandrafetana sy ny fampiasa amin'ny famolavolana mari-pamantarana ny fitondran-tena sy ny orinasa politika. Ny Mafy efa miroborobo ny fanatanjahan-tena sy fialam-boly fanao Ny mpanjifa dia ahitana matihanina atleta, fanta-daza amin'ny mpisehatra, mpanakanto, ambony modely, mpanoratra, mpamokatra, ny tale sy ny mpitantana ao amin'ny sary mihetsika, ny fahitalavitra sy ny onjam-peo, ny mozika, literatiora sy ny fialam-boly hafa orinasa. Dia misolo tena ireo sy ny mpanjifa hafa ao ny fanatanjahan-tena sy fialam-boly ny indostria momba ny resaka miainga avy amin'ny fifampiraharahana ny fifanarahana talenta fitantanana sy mifandray raharaham-barotra sy ny manokana ny toro-hevitra, resa-barotra, ny fahazoan-dalana, ny marika sy ny varotra efaha amin'ny isam. Isika ihany koa ny manome mahery, manam-pahaizana momba ny solontena ao an-pitsarana sy ny fanelanelanana ny fifanarahana sy ny hafa fifandirana ho an'ny mpanjifa ao ireo tsy manam-paharoa sy ny tena manokana ny orinasa. Ny Mafy famohana zon'ny olom-pirenena toe-javatra, ao anatin'izany ny misolo tena ny olona izay efa fanavakavahana momba ny vahoaka trano, no niharan'ny herisetran'ny polisy, na dia efa nanana ny Voalohany dia Fanitsiana na Noho ny Dingana nanitsakitsaka ny zon'olombelona. Izahay misolo tena ny vondrona ny olona izay nitondra ny fitakiana ny ara-pirazanana, manohitra ny malaza ao an-toerana ny sampan-draharaham-toeram-Pivarotana.
Ny Mafy ihany koa dia fitaovana eo amin'ny fandresen-dahatra ny Governemanta misahana ny Fahamarinana mba hanokafana indray ny mampihoron-koditra momba ny raharaha famonoana ny olona malaza, mbola be raisina ho toy ny fitaovana hitondra fiovana goavana ho an'ny firenena ny zon'ny olom-pirenena hetsika.
Isika ihany koa dia nandray ny multi-million ny didim-pitsarana amin'ny anaran'ny vahoaka mpiasa ao Nassau County izay noho ny fizotry ny zon'olombelona no voahaja rehefa izy no faranana. Ny laza, ny fiarovana ny fahaiza-manao sy ny fanoloran-tena ho an'ny mpanjifa manaporofo sarobidy tamin'ny fotoana ny zo sivily no voahitsakitsaka.
Mpanjifa ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Shina ho an'ny Isan-Tanàna
Гӹц гишӓн законым престолонаследие Китай халык республика